WFP oo dhaqaale u heshay qaxootiga ku nool xeryaha Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
WFP oo dhaqaale u heshay qaxootiga ku nool xeryaha Kenya
15th February 2014 A warsame Af Soomaali 0
Nairobi – Mareeg.com: Hayada Cuntada u qaabilsan Qaramada Midoobay ee WFP ayaa sheegtay inay heshay $8.2 milyan oo doolar oo lagu taageerayo qaxootiga Soomaalidu ka mid tahay ee ku jira xeryaha Kaakuma iyo Dhadhaaab ee dalka Kenya.
Dhaqaalahaasi ayaa waxaa ku deeqay dowlada Sweden oo bixisay $6.9 Milyan oo doolar iyo dowlada Finland oo bixisay $1.3 Milyan oo doolar. Lacagtaan ayaa jawaab u aheyd dalab horay hayada WFP ugu dgubisay caalamka oo ku saabsanaa in dhaqaale loogu deeqo qaxootiga ku jira xeryaha Kenya.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo dowladaha Sweden iyo Finland taageeradooda waqti xaadirkaan” sidaasi waxaa yiri agaasimaha hayada ee dalka Kenya, Ronald Sibanda.
Hay’adda ayaa sheegtay in dhaqaalahaasi lagu taageeri doonto dadka qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xeryaha qaxootiga ee ku yaalla dalkaasi Kenya, kuwaasi oo sanadkii lasoo dhaafay laga yareeyay gargaarkii ay heli jireen.
Safiirka dowlada Sweden ee dalka Kenya Johan Borgstam ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay la shaqeeyaan WFP isagoo sheegay in dadka ku jira xeryaha ay heystaan dhibaatooyin badan.
Qaxootiga Soomaalidu ka mid tahay eek u jira xeryaha Kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ka cabanayeen hooy la’aan iyo gargaarkii ay heli jireen oo yaraaday.
Qaxootiga ayaa si sax ah u helin dhaqaalaha caalamka looga soo uruuriyo magacooda, hase ahaatee waxyaabaha yaryarka ah ee ay helaan ayaa sida la sheegayo uga roon inaan waxba la siinin.
Sawirro: Ciidamada Itoobiya ee maalmahaan ku qulqulayey Soomaaliya
Khadiijo Maxamed Diiriye Oo ka jawaabtay Oraahdii “Halkaan kufsigu waa iska caadi”